Tolo-Tanan’i Frantsa Sy Ny Banky Mondialy Hanampy Ny Firenena Afrikana Hahay Hifampiraharaha Amin’ny Harena An-kibon’ny Taniny · Global Voices teny Malagasy
Tolo-Tanan'i Frantsa Sy Ny Banky Mondialy Hanampy Ny Firenena Afrikana Hahay Hifampiraharaha Amin'ny Harena An-kibon'ny Taniny	Voadika ny 10 Oktobra 2012 12:16 GMT
Zarao: Ho fankalazana ny tsingerin-taona faha-40 ny fifanaraham-piaraha-miasa ao anatin'ny Faribola Franc, dia namoaka taratasy iraisana ny filohan'i Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, sy ny minisitry ny vola Frantsay, Pierre Moscovici, hamaranana ny “fitrandrahana tafahoatra ny tahiry Afrikana” [fr]. Taorian'io kabary io dia namoaka fanambarana an-gazety ny Banky Mondialy fa nanangana tahirim-bola hanampiana ny firenena Afrikana hahay hifampiraharaha kokoa ny fitrandrahana ny loharanon-karenany voajanahary. Hita fa tsy ny manasongadina ny tsy fahombiazan'ny governemanta Afrikana hianoka ny loharanon-karenany ihany fa ny tombontsoa tafahoatra azon'ny mpitrandraka iraisampirenena no asongadin'ity fepetra ity amin'ny fomba ofisialy.
Maika Fa ny tanjon'ity fepetra ity ‘hampiroborobo ny fifanarahana ara-barotra marina sy ara-drariny’ no laharam-pahamehana azo raisina amin'ity kabary niarahana ity. Saingy nilaza ihany momba ny fifandroritana taloha nisy teo amin'i Frantsa sy ny zanataniny taloha ity fanambarana tamin'ny mpanao gazety ity. Nanambara [fr] Atoa Ouattara fa :
Mikasa ny hiady amin'ny elanelana misy, matetika loatra, eo amin'ny fomba fijery lany andro sy mpijery lafy ratsin'i Afrika sy ny fihetsiketsiky ny toekarenan'ny Kaontinanta izahay. Mihetsika, misonga, i Afrikan'ny taonjato faha-21 manankarena otrik'harena voanjanahary sy mitady demokrasia. [..] Tsy maintsy faritana indray ny noho izany ny fifandraisana eo amin'i Frantsa sy i Afrika, araka ny fanirian'ny filohan'ny Repoblika Frantsay.
Lahatsarin'ny fihaona teo amin'i Ouattara sy Moscovici, nakarin'i AbidjanNetTV.
Any Togo, République Togolaise miresaka momba ny tetikasa ary nanamarika fa [fr]:
Teny amin'ny sehatra nisy azy ireo i Alassane Ouattara sy i Pierre Moscovici no niantso famaritana indray ny fifandraisana eo amin'i Frantsa sy i Afrika, taorian'ny fifandraisana tsy mazavazava am-polony taona, izay miharo kolikoly tsindraindray, teo amin'i Paris sy ny zanataniny.
Ao amin'ny Jeune Afrique i Stéphane Ballong, manonona ny anaran'i Makhtar Diop, filoha lefitry ny Banky Mondialy misahana an'i Afrika, nanamarika ny tsy fahombiazan'ny Governemanta Afrika hatramin'izao [fr] sy nanome antsipirihany momba ny votoatin'ny Tahirim-Panampiana Hananana Fifampiraharahana Ara-drariny:
“Tsy manana ny fitaovana sy fahalalana ilaina “hibaikoana” ny fahaizana tsara indrindra eto an-tany hanaovana fifanarahana ara-drariny mba ahafahana manao fifanarahana mifandanja.” Tsy maintsy atao noho izany ny ezaka hamenoana izany tsy fahampiana izany amin'ny fanomezana fanampiana ara-teknika ilaina (vola na olona) ho an'ny firenena Afrikana, hahazoana fifanarahana tsara kokoa [.]
Nampiany [fr] :
Sehatr'asa dimy no tokony horakofan'ny Famatsiam-bola: ny tolo-tsaina araka ny lalàna hanatsarana ny fombam-pifanarahana eo amin'ny sehatry ny orinasam-pitrandrahana, Eo ambony ny famantarana ny fahafaha-manaon'ny rafi-panjakana, fanampiana ara-teknika mifandraika ao amin'ny resaka olana ara-piarahamonina, tolo-tsaina eo amin'ny politikam-panjakana mikendry hampivelatra ireo faritra mitombo manokana eo ambony sy ambanin'ny [manodidina?] orinasa mpitrandraka. Nonolo-tena hitondra fandraisana anjara mitentina 15 tapitrisa euris hozaraina amin'ny Banky Mondialy sy ny ny Banky Afrikana Misahana ny Fampandrosoana.
Toeram-pitrandrahan'i Kailo, RDC nopihan'i Julien Harneis hita Flickr (CC-license-2.0)
Fepetra enti-manohitra ny Ambaindain'i Shina aty Afrika?
Maro ny mpitazana no manolo-kevitra fa ireo fepetra noraisina ireo dia enti-manohitra ny fitomboan'ny ambaindain'i (influence) Shina eto Afrika [fr]. Tsy nanadino nanamarika ny mampihomehy [fr] amin'ny toe-draharaha i Philippe Hugon, Talem-pikarohan'ny IRIS (Ivom-pifandraisana Iraisam-pirenena sy Stratejika):
Raha jerena ankapobeny, nitovitovy tamin'izay natao tany Frantsa 30 taona lasa izay ihany ny fifandraisan'i Shina amin'i Afrika: fifandraisana matanjaka eo amin'ny sehatry ny politika, fifampidipidiram-pifandraisan'ny fanjakana sy ny tsy miankina miharo kolikoly vaventy. Ary tsy misy ijerena ny toe-draharaha ara-tontolo iainana sy ara-piaraha-monina izany rehetra izany.
Bacary Gill any amin'ny Repoblika Democratikan'i Kongo manamarika ny fahasamihafan'ny fomba fampandrosoana [fr] ataon'i Frantsa sy Shina aty Afrika:
Mpanetsika eo amin'ny fananganana foto-drafitr'asa i Shina. Atsangany ihany koa ny tetikasa heverin'ny orinasa tandrefana ho tsy ampy ahazoana tombombarotra loatra. Fa tratran'ny fifaninanana Shinoa ny orinasa vao misandratra Afrikana sasantsasany, ary tsy mianoka tombontsoa avy amin'ny fisian'ireny tetikasa vaovao ireny matetika ny mponina ao an-toerana, satria tsy ampy ny tahan'ny fampidiran'asa sy ny fifampiraharahana arakasa ao an-toerana (sous-traitance). [..] Na dia eo aza ny fifandraisana mafy amin'ny firenena Afrikana maro, tahaka ny niròna amin'ny fisintahana izany i Frantsa ao anatin'ny fotoana maharitra. Ny lanjan'ny fampiasam-bola sy ny fisian'ny tafika dia samy mirona amin'izany zotra izany avokoa.
Na eo aza izany, ity fandraisana an-tanana ity dia manondro fa tsy hamela maina an'i Shina hanitatra ny ambaindainy akory i Frantsa. Manamarina izany fanirian'i Frantsa izany ny tafatafa nifanaovana tamin'Atoa Moscovici ao amin'ny Jeune Afrique. Hoy [fr] ny Minisitry ny Vola Frantsay :
Tsy mahasahana afa-tsy 3%n'ny fanondranana sy fanafaran'entambarotra frantsay i Afrika atsimon'i Sahara, amin'ny fanafaran'entana 14 miliara Euros sy fanondranan'entana 12 miliara. Kely loatra. Tsy te-hitsikera an'i Shina aho, hitako fa lany andro izany. Amin'ny alalan'ny fanovana zotra ny fiaraha-miasan'i Frantsa sy Afrika mankany amin'ny fampiasam-bola no ahitantsika ny vokatra tsara indrindra. Amin'ny fanampiana ny orinasantsika hahazo an-tsaina bebe kokoa ny risika, izay matetika avoitra be loatra; amin'ny firosoana, manome ny laharam-pahamehana ny sehatr'asan'ny angovo izay ananantsika fahaizana manokana. Tsy mila matahotra an'i Shina isika.
Eto Madagasikara, efa noresahina tamin'ny antsipirihany ny anjara toeran'i Shina eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana loharanon-karena voanjanahary, indrindra fa ny fanondranana bolabola tsy ara-dalàna [mg]. Saingy ny nataon'i Frantsa teto Madagasikara nandritra ny krizy politika 2009 no mahatonga ny mpanara-baovao eto an-toerana ho mailo amin'izay fandraisana an-tanana ataon'ny Frantsay hanampiana an'i Afrika. Izany no nahatonga an'i Lalatiana hitatitra ny lalan-tsarotra diavin'i Afrika Miteny Frantsay [fr] taorian'ny fanjanahantany, ka nahazoana ity filazan-kevitr'i Rajo Rajaonarivelo (eo amin'ny sehatra fanehoan-kevitra) :
Tsy azo lavina fa nitady maodelim-pitondrana sy mpitantam-panjakana miaro ny tombontsoany any amin'ny firenena nozanahany taloha ny Frantsay. Nefa araka ny filaza hoe “mila olona roa raha handihy tangô”, tsy maintsy mifanara-kevitra aminy amin'izany ny mpitondra antsika. Izay ve no zava-misy? Antsika rehetra no mamaly izany. Eo amin'ny sehatra hafa, talohan'ny fanjanahantany sy ny taona vitsivitsy taoriany ihany koa, dia nahatratra ny fahavitan-tena teo amin'ny vary isika. Nisy aza ny taona maromaro nanondrana vary i Madagasikara. Ankehitriny, tsy maintsy manondrana vary 200.000 ka hatramin'ny 300.000 taonina isan-taona isika. Tsy mieritreritra aho fa manana tombontsoa amin'izany i Frantsa na i Angletera.
Tsikaritra ihany fa misy ny marimaritra iraisana fa mila mahatakatra kokoa ny fomba hifampiraharahana amin'ny fitrandrahana ny harena voajanahariny ny firenena Afrikana. Raha tena mitondra tokoa any amin'ny fifanarahana ara-drariny ity fepetra ity dia tsy hiahiahy ny olona hoe misy paikady zeopolitika tao ambadika.
Soratra miverina: Ireo fehin-dalàna any Madagasikara dia tsy mahafehy ny fampanjariana volabe amin’ny fitrandrahana ny harena ambanin’ny tany · Global Voices teny Malagasy	[…] sy ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena [na FMI] ahafahana manampy ireo firenena andalam-pandrosoana hanatsarany ny fomba ifampiraharahany amin'ny fitrandrahany ireo harena an-kibon'ny taniny. […]
29 Novambra 2012, 03:49	Ajanony ihany
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Svenska, Français
Afrika MaintyCote d'IvoireFrantsaMadagasikaraR.D. KongoTogo
FampandrosoanaFifandraisana iraisam-pirenenaFitantanam-pitondranaMediam-bahoakaToekarena sy FandraharahànaTontolo_iainana